Abavelisi boMlawuli abaFumanayo kunye nabaXhasi - China uMlawuli woFikelelo kwiFektri
I-WS6000-M500P6 Isilawuli esiHlangeneyo seNethiwekhi
I-WS6000-M500P6 sisilawuli esingenazingcingo ezininzi esidibanisa ukungqinisisa, ulawulo lwenethiwekhi kunye nolawulo lwendawo engenazingcingo, enolawulo olulula, ulondolozo olufanelekileyo, amandla amakhulu kunye nokusebenza okuphezulu. Yenzelwe inethiwekhi encinci kunye naphakathi, inokulawula ukuya kuthi ga kumanqaku angama-512 okufikelela (ii-APs). Ngomsebenzi omtsha we-desktop kunye ne-design style, i-WS6000-M500P6 kulula ukuyisebenzisa kwaye kulula ukuyigcina nokuyihambisa, enokuwanelisa ngokufanelekileyo umthengi ...
Umlawuli woFikelelo kwi-DCWS-6028-C
I-DCN DCWS-6028-C sisizukulwana esitsha sokusebenza okuphezulu kwe-10G isilawuli esingenazingcingo. Yenzelwe isizukulwana esitsha senethiwekhi esine-santya esiphezulu, inokulawula ukuya kuthi ga kumanqaku angama-256 okufikelela ngaphandle kwamacingo (ii-APs) kwaye ilungele inethiwekhi encinci engenazingcingo kunye naphakathi. I-DCWS-6028-C idibanisa ulawulo oluchanekileyo lomsebenzisi, ulawulo olugqibeleleyo lwe-RF kunye neendlela zokhuseleko, i-QoS ephezulu kunye nokuzula okungagungqiyo, ukubonelela ngemisebenzi yolawulo olunamandla lokufikelela kwi-WLAN. I-DCWS-6028-C ine-3 epheleleyo yokutshintsha okungundoqo ...
I-DCWS-6028 (R2) Isilawuli esiFakelweyo seNgcingo kunye ne-Wireless
I-DCWS-6028 (R2) sisilawuli sokufikelela esingenazingcingo (AC) sokunxibelelana ngaphandle kwamacingo, esinokulawula ukuya kuthi ga kwiindawo zokufikelela ezili-1024 (APs). Inikezela ngolawulo olupheleleyo lwe-RF kunye nokhuseleko, iiQoS ezinamandla, ukuzulazula okungagungqiyo kunye nolawulo olupheleleyo lwee-APs, zinokusetyenziselwa ukwakha uthungelwano olukumgangatho ophakathi wekhampasi, ihotele, iofisi yeshishini, isibhedlele, njlnjl. Ngehardware ASIC, DCWS-6028 (R2 ) inokuxhasa ukuhanjiswa kwenqanaba lokudluliselwa kweepakethe zedatha ye-IPv4 / IPv6 kunye nenkxaso yendlela eguqukayo ...